Base Toliara: hanome asa 3 900 | NewsMada
Base Toliara: hanome asa 3 900
Anisan’ny tetikasa goavana eto Madagasikara, toy ny Ambatovy sy ny QMM Taolagnaro, hitondra fampandrosoana ny faritra sy i Madagasikara ny Base Toliara. Toy ny fahita eran-tany, tsy maintsy misy ny manohana ny tetikasa toy izany, ary eo koa ny manohitra. Rehefa tena zohina, ao anatin’ny vinan’ny fanjakana ankehitriny ny hampandrosoana haingana ny firenena satria efa lalina loatra ny fahantrana. Tafiditra ao anatin’ny vina IEM, novolavolain’ny filoha Rajoelina Andry, ny famoronana asa maro, ny fampandrosoana isam-paritra, ny fampandrosoana tena mipaka eny ifotony.
Manomana ny fitrandrahana
Ankehitriny, ao anatin’ny dingana fanomanana ny fitrandrahana fasimainty any Ranobe ny Base Toliara, ao anatin’ny distrikaToliara II, 54 km miala an’i Toliara I. Misy hatrany ny tatitra ataony amin’ny rafi-panjakana isan-tsokajiny. Eo koa ny fifampidinihana tsy tapaka amin’ny fiarahamonina eny ifotony amin’ny fanajana ny fomban-tany sy ny maha Malagasy.
Amin’ny ankapobeny, manodidina ny 3 900 ny asa ateraky ny tetikasa Base Toliara, manomboka any amin’ny fametrahana ny fotodrafitrasa samihafa ilain’ny orinasa ary eo koa ny tena fitrandrahana.
Laharam-pahamehana ny mponina eny ifotony
Nambaran’ny tale jeneralin’ny Base Toliara, Ramahefarivo Jean Bruno, fa anisan’ny mampiavaka ity tetikasa ity, miohatra amin’ireo tetikasa vahiny vaventy mitrandraka harena an-kibon’ny tany efa misy, ny fanofanana mialoha ny olona hiasa ao aminy, ho an’ny fananganana ny fotodrafitrasa na koa mandritra ny fitrandrahana. Maherin’ny 5 000, ankehitriny, ny fangatahana hiasa sy hiofana voarain’izy ireo. Traikefa azony tany Kenya, itrandrahany akora titane, ataon’ny sampana orinasany, Base Titanium, io, izay teratany kenyanina avokoa ny 97%-n’ny mpiasa.
Manampy ireo, goavana ny tombontsoa azon’ny firenena sy ny fanjakana malagasy satria manodidina ny 226 tapitrisa dolara isan-taona ny anjara birikiny amin’ny harinkarena faobe (PIB). Tafiditra ao anatin’izany ny 4 tapitrisa dolara isan-taona ho tamberim-bidy amin’ny harena an-kibon’ny tany.